Ukwakhiwa kweMicrosoft Java manje sekutholakala kuwo wonke umuntu | Kusuka kuLinux
Okuhle | 28/05/2021 16:47 | Izaziso
IMicrosoft isiqalile ukusabalalisa okwayo ukusatshalaliswa kweJava ngokususelwa ku-OpenJDK, ukuhlinzeka ngokusabalalisa kwamahhala kweJava okungancintisana nokusatshalaliswa kweJava Oracle. Umkhiqizo Isatshalaliswa mahhala futhi iyatholakala ngekhodi yomthombo ngaphansi kwelayisense ye-GPLv2.
Ama-binaries IMicrosoft Build ye-OpenJDK ingaqukatha ukulungiswa nokulungiswa ezithathwa njengezibalulekile kumakhasimende nakubasebenzisi bangaphakathi, kepha ezingafakwanga kuphrojekthi engenhla ye-OpenJDK. Lokhu kulungiswa nokuthuthuka kuzobonwa kumanothi wokukhishwa anekhodi yomthombo etholakalayo.
Njengesikhumbuzo, i-Oracle ngo-2019 idlulisele ukusatshalaliswa kwayo kanambambili kweJava SE kusivumelwano esisha selayisense. que kuvimbela ukusetshenziswa kwezentengiselwano futhi ivumela ukusetshenziswa kwamahhala kuphela ekuthuthukisweni kwesoftware noma ekusetshenzisweni komuntu siqu, ukuhlolwa, ukwenza prototyping, nasekubonisweni kohlelo lokusebenza. Ukusetshenziselwa ukuhweba ngaphandle kwenkokhiso, kuphakanyiswa ukuthi kusetshenziswe iphakethe lamahhala le-OpenJDK elayisensiwe ngaphansi kwe-GPLv2 ngaphandle kwe-GNU ClassPath evumela ukuxhumanisa okunamandla nemikhiqizo yezentengiso.
Igatsha le-OpenJDK 11, elisetshenziswa ekusatshalalisweni kweMicrosoft, libhekwa njengezinguqulo ze-LTS, izibuyekezo zazo ezizokwenziwa kuze kube ngu-Okthoba 2024. I-OpenJDK 11 inakekelwa yiRed Hat Company.
Kumele kuqashelwe ukuthi Lokhu kusatshalaliswa kwe-OpenJDK okushicilelwe yiMicrosoft kungumnikelo wenkampani ohlelweni lwezinto zeJava kanye nomzamo wokuqinisa ukuxhumana nomphakathi. Ukusatshalaliswa kubekwe njengokuzinza futhi sekuvele kusetshenziswa imikhiqizo nezinsizakalo eziningi zeMicrosoft, kufaka phakathi i-Azure, iMinecraft, iSQL Server, i-Visual Studio Code, ne-LinkedIn.
Kushiwo lokho IMicrosoft Yakha i-OpenJDK izoba nomjikelezo omude wesondlo ngokukhishwa njalo ngekota kwezibuyekezo zamahhala. Izofaka nokulungiswa kanye nezithuthukisi okuthi, ngasizathu simbe, zingamukelwa ku-OpenJDK mainstream, kepha zibonakale zibalulekile kumakhasimende we-Microsoft namaphrojekthi. Lezi zinguquko ezingeziwe zizophawulwa ngokusobala kumanothi wokukhishwa futhi zishicilelwe kukhodi yomthombo endaweni yokugcina yephrojekthi.
Namuhla siyajabula ukumemezela ukutholakala okujwayelekile kweMicrosoft Build ye-OpenJDK, ukusatshalaliswa okusha kwezindleko kwe-OpenJDK okungumthombo ovulekile futhi otholakala mahhala kunoma ngubani ongakusebenzisa noma yikuphi. Njengoba sishilo ekuqaleni lapho simemezela ukubukwa kuqala kweMicrosoft Build kwe-OpenJDK, iMicrosoft isebenzisa iJava eningi enama-JVM angaphezu kwama-500.000 asebenza ngaphakathi. IJava Engineering Group iyaziqhenya ngokunikela kwi-ecosystem yeJava futhi isize imithwalo yemisebenzi yamandla efana ne-LinkedIn, Minecraft, ne-Azure.
Microsoft ubuye wamemezela ukuthi usejoyine i-Eclipse Adoptium Working Group, ethathwa njengengxenyekazi ezimele yomthengisi yokusabalalisa amabinari we-OpenJDK ahambisana ngokuphelele nemininingwane yeJava, ahlangabezana nenqubo yekhwalithi ye-AQAvit, futhi alungele amaphrojekthi wokukhiqiza.
Ukuhambisana kokucaciswa okugcwele, imihlangano esatshalaliswa nge-Adoptium iqinisekisiwe ngokumelene ne-Java SE TCK (isivumelwano esiphakathi kwe-Oracle ne-Eclipse Foundation sisetshenziselwa ukufinyelela ku-Technology Compatibility Kit).
Okwamanje, I-OpenJDK yakha i-8, 11, ne-16 kusuka kuphrojekthi ye-Eclipse Temurin (phambilini ukusatshalaliswa kweJava kwe-AdoptOpenJDK) zisatshalaliswa ngqo nge-Adoptium. Iphrojekthi ye-Adoptium ifaka phakathi nemihlangano ekhiqizwe nge-IBM ye-JDK ngokususelwa kumshini obonakalayo we-OpenJ9 Java, kepha le mihlangano isatshalaliswa ngokwehlukana ngesiza se-IBM.
Ukusatshalaliswa kufaka phakathi okuphumelelayo kweJava 11 neJava 16, ngokususelwa ku-OpenJDK 11.0.11 naku-OpenJDK 16.0.1. Ukwakhiwa sekumi ngomumo yeLinux, Windows ne-MacOS futhi ayatholakala ekwakhiweni kwe-x86_64. Ngokwengeziwe, ukwakhiwa kokuhlola okususelwa ku-OpenJDK 16.0.1 kukhiqizelwe izinhlelo ze-ARM, ezitholakala ngeLinux neWindows.
Ngaphezu kokutholakala okujwayelekile, iMicrosoft nayo okunikezwayo IMicrosoft Yakha izithombe ze-OpenJDK Docker namafayela ahambelana neDocker. Lokhu kudizayinelwe ukusetshenziswa yinoma yiluphi uhlelo lweJava noma ingxenye yohlelo lweJava yokuthunyelwa noma yikuphi, kufaka phakathi iMicrosoft Azure.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » Ukwakhiwa kweMicrosoft Java manje sekutholakala kuwo wonke umuntu
Ukuhlolwa kwe-alpha kweLibreOffice 7.2 sekuqalile
I-ONLYOFFICE Docs 6.3 iza nokusekelwa kwamatimu nokuningi